» WAR CUSUB: Xildhibaano sheegay in Xasan sh, uu iibsanayo Hantida Taala Villa Somalia…Badweyntimes.com
WAR CUSUB: Xildhibaano sheegay in Xasan sh, uu iibsanayo Hantida Taala Villa Somalia…
Xubno Xildhibaano ka tirsan BFS ayaa codsaday in la hubiyo Hantida Dowladda ee taalla Xarunta Madaxtooyadda ee Villa Somalia, ka hor intaysan dhicin Munaasabad Xil-wareejinta.
Xildhibanaadaasi ayaa ku eedeeyeen in Madaxa haatan ugu sarreeya Shaqaalaha Madaxtooyadda uu la baxayo iyo inuu iibinayo Hantida Dowladda ee taalla Villa Somalia.
Waxay kaloo carrabka ku dhufteen in qaar ka mid ah Gaadiidka iyo Qalabka Milliteriga ee yaalla Madaxtooyadda horey loo qaatay, waa sida ay hadalka u dhigeen.
“Qaar annaga naga mid ah ayaa loo ballan qaaday Gaadiidka, haddii aan u codeyno Madaxweynihii hore. Qaarkeen waa la siiyey, halka kuwo kalena weli sugayaan in la siiyo Gaadiidkaasi” ayuu yiri mid ka mid ah Xildhibaanadda BFS.
Waxa uu intaasi ku daray in hantida la bixiyey ama la iibiyey ku jiraan Gaadiidka Gaasahaaman.
Dhinaca kale, Xildhibaanadda ayaa sheegay in ay cabashadooda u gudbin doonaan Xeer-ilaaliyaha Guud si uu u amro in la hubiyo dhamaan Hantida taalla Villa Somalia inaan lala bixinin.
Xildhibaan kale ayaa isagana ugu baaqay Madaxweynaha Cusub inuu hubiyo inaan wax Hanti Qaran ah lagala bixinin Villa Somalia, ka hor inta uusan ka shaqo bilaabin Xarunta Madaxtooyadda Qaranka.
Madaxweynaha cusub ee Somalia, Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la filayaa in Munaasbaadda uu Xilka kula wareegayo la qabto bishan February 22-da.
« Warbixinta Ka HoreysayHanti dhowrka Qaranka”Miisaaniyadii shalay la Ansixiyay waa Sharci darro si qudba siro ah..”
Warbixinta Xigto »XOG: M/weyne Farmaajo Goormee ayuu la Wareegayaa Villa Somalia…
HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Hal Jawaab : WAR CUSUB: Xildhibaano sheegay in Xasan sh, uu iibsanayo Hantida Taala Villa Somalia…
axmed says:	February 15, 2017 at 11:30 am	War Xishooda, Waa la maleynayey, in ay wax alla wixii ay arkaan Bililiqaysanayaa, war waxaani waa xaaraan, waa hanti qaran, hadey aqalka fujin karaan ,wey qaadan lahaayeen, iimaanka alla idinka qaad , sow ma dhergaan. warwaxaan Farmaajio wax haka qabto, waa in millaterigu madaxtooyada la wareegaa, waxa ka daran , hadey leeyihiin Xilal ha naloo dhiibo. dulli. Adoonsi bey kuwaan ku fiican yihiin, waa waxa ajnebigu u hunguriyeynayaa.